किन सूर्योदय छुटाउदैनन् अक्षयकुमार ? Canada Nepal
किन सूर्योदय छुटाउदैनन् अक्षयकुमार ?
काठमाडौं - बलिउड अभिनेता अक्षयकुमार फिटनेसका लागि पनि उत्तिकै चर्चित छन् । किनकि उनको दिनचया अनुशासित छ । उनले याे दिनचर्या र जिन्दगीमा इन्जोय गर्ने गरेको बताएका छन् । ‘मैले कसैको दबाब र करकापमा याे जिन्दगी राेजेकाे हाेइन, यसलाई म इन्जोय गर्छु,’ अक्षयले भनेका छन् ।
उनले प्राय: छायाँकन ८/९ घण्टामै सक्ने गरेका छन् । 'अक्षयले बिहानै छायाँकन थाल्छन् र बेलुकीसम्म प्याकअप गर्छन्,' उनीसँग धेरै फिल्ममा काम गरिसकेका रितेश देशमुखले भने ।
उनले हाउसफूल सिरिजसँगै 'हे बेबी'मा अक्षयसँग काम गरेका छन् । अक्षयले पछिल्लो समय लकडाउनमा छायाँकन गरेको फिल्म 'बेल बटम' का लागि मात्र यो नियम ब्रेक गरेका थिए । उनले प्याकेटको खानेकुरा नखाने गरेको बताउने गरेका छन् । 'म प्याकेटको खानेकुरा खादिन भने अल्कोहल पनि लिने गरेको छैन र आफ्नो अनुसासन कायम गर्ने गरेको छु,' अक्षयले एक इभेन्टमा भनेका छन् । ५४ वर्षमा पनि फिट रहनुको कारणबारे उनले इभेन्टमा बताएका थिए ।न्युज कारखाना
आश्विन २५, २०७८ सोमवार २१:१७:५६ बजे : प्रकाशित